HejHajimete no Gal - Xilliga 2 La Taariikhi karo Taariikhda Premier - Muuqaalka Shumaca
Xaajiete no Gal Season 2
1 Comment on Hajimete no Gal - Xilliga 2 Taariikhi Premier League
Waxaan maqaal kale ka samaynay xaalad Xaajimete no Gal Season 2 maadaama ay aad u dhowdahay oo aan hayno macluumaad dheeraad ah. Fadlan halkan ka akhri:
Guudmarka - Xajimete no gal Xilli 2 Taariikhi Horyaalka Premier League
Xajimete no Gal, oo qiyaas ahaan u tarjumeysa "Saaxiibadayda koowaad waa Gal" kaliya waxaa lagu soo qaatay 10 qaybood, laakiin sababo jira awgood taxanaha (hadaad taas u wici karto) ayaa ugu jecel taageerayaasha anime iyo kuwa naqdiya.
Marka laga reebo dabeecadda weyn ee Yame Yukana jirkeeda, dabeecaddeeda qosolka badan iyo soo jiidashada jilicsan ayaa ah waxa sida muuqata u ilaaliya daawadayaasha inay daawadaan dhammaan.
Haddii aad hadda dhammeysay daawashada anime sida Clannad ama Rabitaanka Scum, waxaan kugula talineynaa inaad daawato tan maadaama ay kugu farxi doonto.
Dhamaan astaamaha waa wax xusuus mudan oo lagu riyaaqo daawashadooda runtiina, waxaan is arkay anigoo madaxa ka qoslaya qaar ka mid ah wadahadalladii ay jilayaashu sheegayeen.
Jilayaasha ugu waaweyn - Xajimete no gal Xilli 2 Taariikhi Premier League
Marka hore waxaan leenahay Yama Yukana, oo ah arday dhigta dugsiga sare ee caanka ah halkaasoo uu dhigto astaamaha labaad ee Junichi. Waxaa loo arkaa inay tahay gabadha caanka ah qaabka ay u labisato hadalka iyo ficilkaba. Aragtida guud ee ardayda kale oo ay ka mid yihiin Junichi iyo asxaabteeda ayaa ah "Gyal“. Si kastaba ha noqotee, waxaa la muujiyay inaysan ahayn sida bandhiggu u muujinayo iyada oo kale, runtiina waxay leedahay dabeecad la jecel yahay. Uma muuqato inay dadka kale ku xukumeyso iyadoo ku saleysan muuqaalkooda waxayna umuuqataa inay tahay qof naxariis iyo daryeel leh oo niyad wanaagsan leh.
Second dabcan waa Junichi Hasiba, oo waliba dhigta isla iskuulka ay dhigato Yukana. Qeybaha hore Junichi waxaa loo arkaa inuu yahay "nerd", "scum" iyo qof guud ahaan aan loo baahnayn. Tani waa sababta oo ah waxaa qabtay Yukana isagoo eegay majaladda majaajillada intii uu dugsiga ku jiray. Si kastaba ha noqotee, waxay ogaatay in Junichi uu yahay nin caadi ah oo doonaya inuu ku noolaado nolol bilaa riwaayad ah oo uu furo bikradnimadiisa, taas oo ay ku diidan yihiin asxaabtiisa, oo isaga laftiisa la mid ah.
Xarfaha Sub - Xajimete no gal Xilli 2 Taariikhi Premier League
Dhammaan astaamahan dhinacyadu waxay u shaqeeyeen si dhammaystiran iyagoo bixiyay jawi wanaagsan, taasoo ka dhigaysa sheekada guud mid kaftan badan oo raaxo leh oo dabcan dib loo soo celiyo. Xaqiiq ahaan, waxaa jira jilayaal kale oo aan sheegi karno, hase yeeshe, ma lihin waqti aan ku wada daboolno dhammaantood sidaa darteed waxaa halkan ku xusan tixraacyo sharaf leh.
Waxaa jira dabeecad kale oo aanan si fudud ugu xusin magaceeda xaqiiqda ah inuu yahay suugaanyahan suugaaneed, laakiin qaar ka mid ah waxyaabihii uu sheegayay ayaa iga qoslinayay wejigayga. Waxay ahayd mid ka badan "ma rumaysan karo inuu dhabtii yidhi qosolkaa" marka loo eego "oh raggan qosolka badan ee qosolka badan", laakiin mararka qaarkood majaajillada waa inay noqotaa mid mugdi ah si ay u shaqeyso. Waan ogahay pedophilia maahan wax kaftan ah, laakiin fadlan kaliya daawada clip-kan waad arki doontaa waxaan ula jeedo. Waxaan rajeynayaa inaynaan haysan nimcada inaan ku aragno bahalkan xilli 2aad ee Hajimete no gal.
Laga soo qaatay Xilligii 1aad, Qeybta 4aad - Xajimete ma heli doono xilli 2?
Ku noqoshada sheekada ugu weyn, dhagarta oo dhan waxay ku wareegsan tahay Junichi si qalad ah oo u weydiiso Yukana. Sababtuna waxay tahay isaga ayaa u dejiyay inuu tan ku sameeyo asxaabtiisa, oo aan goor dambe u imaan doonno. Mid ka mid ah asxaabtiisa ayaa warqad kaga tagaya qolka labiska ee Yukana isaga oo weydiisanaya inay kula kulanto iskuulka gadaashiisa iyo marka Junichi soo muuqdo Yukana ayaa isaga sugeysa. Sheekada ugu muhiimsan waa mid aad muhiim u ah maadaama ay la xiriirto suurtagalnimada xilli 2 ee Hejimete no gal.
Waxay in muddo ah wada hadlayaan ugu dambayntiina Junichi ayaa weydiistay Yukana qaab qalbi furan oo ku fekeraya inay si kastooy tidhaahdo maya. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii qaar ka mid ah ay wada hadleen labadooda, Yukana waa ogolaaday oo labaduba waxay bilaabeen shukaansi 9-ka qaybood ee hadhay waa dadaallada ay Yukana iyo Junichi ku lug leeyihiin. Iyo, sida caajisnimada leh sida ay dadka qaar ugu malayn karaan dhawaqyadan, 9-ka qaybood ee hadhay runtii aniga aad bay ii maaweelinayeen.
Laga soo qaatay "は じ め て の ギ ャ ル (NAZ)
Waxaan arki doonnaa Junichi iyo Yukana oo wada baashaal badan, xiriirkooduna wuxuu u kordhayaa tan. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in sababtoo ah sida quruxda badan ee Yukana ay tahay, iyo sida ay u dhaqanto, Junichi waxay u maleyneysaa in laga qaadi doono isaga ciyaar aad u qurux badan. Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ay lamaanaha kala kulmaan xiriirkooda runtiina Junichi runti kalsooni kuma qabo Yukana, xitaa wuxuu raacayaa marka ay u aado la kulanka qaar ka mid ah asxaabteeda hore. Xidhiidhku aad buu u jiri doonaa welina wuu saamayn ku leeyahay cimilada ama ma jiri doono xilli 2aad oo ah Hajimete no gal.
Xaqiiqdii, taxanaha oo dhan, waa Junichi oo aan ku kalsoonayn Yukana oo aan ahayn sida kale. Waxaan ka baraneynaa qeybihii dambe in Yukana guud ahaan uu leeyahay dareen Junichi runtiina runtii isaga daryeesho. Xitaa way xanaaqdaa markay hesho Ronko oo "jahwareersan" Junichi markay isku daydo inay ku qasabto inuu galmo la yeesho maxaa yeelay waxay dooneysaa Yukana oo dhan nafteeda. Sidee tani u ciyaari doontaa suurtagalnimada xilli 2 ee Hajimete no gal? Sii wad akhriska si aad u ogaato.
In kasta oo taxanaha oo keliya uu ka kooban yahay 10 qaybood (iyo OV), haddana waxay ku badan tahay macnaha madaddaalada daawadayaasha. Taxanaha oo dhami waa kuwo qosol badan, mararka qaarkoodna kacsi waxayna leeyihiin nooc soo jiidasho leh oo runtii igu sasabtay inaan daawado. Xaqiiqdii waan siin lahaa haddii aad hoos u dareemayso ka dib markaad daawato nooc anime ah oo niyadjab leh maxaa yeelay taasi xaqiiqdii way kugu farxi doontaa.
Xajimete no gal - Xilliga 2 ee Taariikhi Premier League
Imika daabacadii labaad (oo nuqul ahaan waxaan ula jeednaa manga labaad) wali ma qornayn Meguru Ueno runtiina, dhamaadka manga ee sheekada koowaad waxay ahayd mid layaableh. Tani waa sababta oo ah waxaan aragnaa Junichi iyo Yukana oo labaduba dib isugu soo noqonaya kadib markay joojiyaan wada hadalka midba midka kale. Tani waxay si cad u saamayn doontaa cimilada ama haddii kale ma jiri doono xilli loo yaqaan 'Hajimete no gal season 2'.
Tani waxay ka dhigeysaa fursadaha la qabsiga anime labaad ee manga aad u hooseeya. Waa wax laga xishoodo inaan u muuqanno inaan mar labaad aragno labada astaamood, laakiin illaa inta qoraallo badan laga soo saarayo, taasi waa inta aan rajeyn karno.
Marka kani waa waxa kaliya ee aan dhihi karno ee loo yaqaan 'Hajimete no gal season 2' oo si la yaab leh ma jiraan wax anime ah oo halkaas ka jira oo dabeecad ahaan la mid ah Hajemete no Gal, tanina waa nasiib darro. Anime ugu dhow ee aan ka heli karno Hajemete no Gal waa “Fadlan ii sheeg! Galko-chan ”laakiin xitaa waxay leedahay sheeko aad uga duwan tan Hajemete no Gal.
Guud ahaan qiimeynta anime:
Qiimeynta: 3.5 5 XNUMX.
Haddii aad ka heshay akhrinta this fadlan hubi qoraaladayada kale iyo guud ahaan boggeena, maaddaama aan ku dhejino baloogyo la mid ah boggan iyo sidoo kale fikrado iyo warar kale. Dhammaan waxyaabaha loo adeegsaday qoraalladan blog-ka iyo guud ahaan boggan waxaa laga soo qaatay ilaha dadweynaha loona daabacay ujeeddooyin macluumaad iyo madadaalo leh. Aad baad ugu mahadsantahay aqriskaaga!
Tags: hajemetenogal xaajimete no gal hajimete no gal xilli 2 hajimetenogalseason2 awood leh xilli2hajimetenogal
Fujiwara wuxuu leeyahay,
24th June 2020 markay tahay 9:31 pm
Blog fiican, sii wad haddii kor u kaco!
Gelitaan Hore Xilliga Rabitaanka Scum 2 - Taariikhda Horyaalka + Dhammaadka ayaa la sharaxay
Gelitaanka Xiga Black Lagoon - Waa maxay sababta Xilliga 4-aad ay u badan tahay, iyo waqtiga ay ku guuleysan doonto